Isu tinopa chiitiko chedu chekushandira masevhisi mune anotevera mapoka:
Booth Info Vanobatsira
Corporate Chiitiko Vanokurudzira
Sports Chiitiko Models
Roadshow Chiitiko Vanokurudzira
Chiitiko Chinonakidza Matimu
Chiitiko Kunyoresa Vashandi
Campaign Chiitiko Kusimudzira
Nezvaunoda chaizvo, ndapota taura nesu Kunyangwe mune fairs kana zviitiko, vashandi vanomiririra kambani yako.
Inzvimbo yakatarisana yekuratidzira inoratidzira bhizinesi rako kwete muBelgrade chete, asiwo yako yekushanya-kadhi kune vashanyi vekunze. Isu tinotora iyo sangano rechitarisiko chako chakanaka kwete kubva mumaoko ako asi tinokutsigira nesimba uye mune iro diki diki ruzivo nekuitwa kwezvaunofunga.
Vagamuchiri vedu nevagamuchiri vakadzidziswa chaizvo uye vane hunyanzvi hwePC uye mitauro yekune dzimwe nyika.
Boka redu rinoona kuti kutaridzika kwako uye zviitiko zvinobudirira kwazvo.
Nekudaro, isu hatina kurasika kuona izvo zvakatiita kuti tibudirire: Kugutsikana Kwevatengi sekutanga pamberi, chengetedzo yemunhu pachedu uye nekusimbiswa kwemhando senge theme yekutanga.
Iwe une chigadzirwa chakanaka uye iwe unoda kuwedzera kuwedzera kuoneka panguva yekutengesa?
AGENCY SNOB inobatsira iwe mukugadzira, kuronga uye kuita basa rekusimudzira kutengesa.
Nekuti mazuva ano haasisiri kutengeswa pachezvawo, tinoziva Kusimudzira, iyo inovavarira. Vashandi vedu vekusimudzira ndeye ichi chikonzero chakagadzirirwa neCorporate chigadzirwa kudzidziswa, kutengesa kudzidzisa uye kukurudzira kwakanyanya kwemabasa acho.
Mushandirapamwe wekubudirira unosimudzira kukosha kwekuzivikanwa kwekambani yako uye zvigadzirwa zvako. Iwe unogona kugona vatengi pane yako pachako kero, kero nyowani, uyezve kukunda unofanirwa maneja.
Kubudirira kubudiswa kwechigadzirwa chako kunotsigirwa zvakanaka nekusimudzira kwazvino uye kunovimbisa imwe yakawedzera yekuziva.
Mumakore edu anopfuura manomwe ari muindastiri iyi, takadzidza kuti chakavanzika chekubudirira pachiitiko timu yevaenzi nevatambi vane hunyanzvi, vaimboshanda pamwe, uye ikoko kubatsira mutengi nekuve pabasa revashanyi vavo. munzira dzose. Tinogona kudada kutaura kuti takaona vese vangangowana / vatengi vanodii mumusika uyu uri kukura.
Masevhisi edu anozivikanwa:
Zviitiko zvakarongeka nemhemberero
Isu tiri nyanzvi dzekubata zviitiko zvepamutemo: zvehurumende nevatengi vemakambani, tine vatambi nevashanyi vane hunyanzvi mumitambo yakatarwa. Pamusoro pekutaurira kwakanaka uye maitiro akakodzera pachiitiko, isu tinosimbisa zvikuru pane zvakasarudzika zvinodiwa zvechiitiko chiri mumubvunzo nemirairo yaro yekuchengetedza.
Pamusangano wevatori venhau uye zviitiko zvevatapi venhau, vatinoshanda navo vanogamuchira vanosvika vanenge vachisvika, nekukurumidza uye zvine hunyanzvi kubata kunyoreswa kwevamiririri vezvenhau, uye kubatsira nekushandisa maikorofoni pachiitiko chose.
Kunyangwe iri remusangano wezuva rimwe chete kana rezuva rakawanda, vatinoshanda navo vachange varipo munguva dzese, kubva mukugadzirira kuburikidza nemagumo echiitiko, uye vakagadzirira kubatsira chero matambudziko angamuka.
Dzemumba uye Zvekunze Zvirevo uye maRes Exhibitions
Tinogona kutaura tichivimba kuti timu yedu inobata neyayo pachiitiko chero chipi, kungave kuHungary kana kunze kwenyika. Isu tinonyoresa uye tinogamuchira vaenzi, kubatsira mabhuku makamisheni kumahotera, kupa ruzivo nezve hurongwa hwechiitiko, kugovera michina yekududzira - mushoko, tinoita zvese kugutsa vese vashanyi uye varongi.
RUDZIMAI RWEZVO REMAHARA
KUTI UVE KUCHENGETA
HURUMENDE KUTI VANE KUKOSHA
RIMWE PASI REMAHARA DZEMAHARA DZVAKADZWA - CACIB BELGRADE
YEMUNYAYA YENYAYA, KUNYENGETSA & KUSVIRA SHOKO
Yenyika YEMOTOCYCLE SHOW
YEMAHARA YEMAHARA - YEMAHARA DZVIMBO
RUDZIMAI RWEMUNYAYA UYE KUKOSHESA COSMETICS, HAIRCARE, ZVIRWERE NEVENYUYO.
YEMUNYAYA YEMUNHU KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI DZIDZE CHETE
YEMUNYAYA YEMUNYENGA WEMABHUKU NEZVINYORWA ZVINOKOSHA (UFI)
CHEMA FUTURE GAMING BELGRADE
RUDZIMAI RWEMAHARA, PAPERI NEZVINHU ZVINOGONESESA ZVENYAYA - GRAFIMA
YEMPENYAYA IT NEMAHARA EQUIPMENT FAIR - BIROEXPO
KUSVIRWA NOKUFUNDI DZESHURE uye KUTENDA
RUDZIMAI RWEZVO RWEMAHARA
RUDZIMAI RWEMUNYAYA KUSVIRA KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA - ECOFAIR
Yenyika YEMAHARA Ichokwadi cheMEDICINE
Yenyika Yese BELGRADE BHUKU FAIR
DZIDZO YEMADZIMAI YEMADZIMAI NOKUDZIDZA
Bell FAIR - DZIDZO YEMAHARA
CHOKWADI CHEMA ZVEKUSHANDURA, KURIMA UYE KUKANGANYA
Yenyika YEMAKONZERO YEMUFANANIDZO, KUKUNDA UYE KUSVIRA DECORA (UFI)
KUKONZESESA MACHINESES, MABHUKU NEZVINHU ZVINOGONESESA ZVENYAYA IYOYOYO YEMAHARA (UFI)
CHEMA CHEMA ETHNIC CHAKADYA uye Kudhira